Baraha Bulshada iyo Shaqalaha Shaqaalaha | Martech Zone
Baraha Bulshada iyo Shaqalaha Shaqaalaha
Saturday, April 4, 2009 Isniin, November 4, 2013 Douglas Karr
John Jantsch wuxuu weydiinayaa su'aal weyn, Ma haysataa Baraha Bulshada oo aan Tartan lahayn?
Su’aal kale ayaa noqon karta,Shirkad ma hirgelin kartaa warbaahinta bulshada oo aan tartamin?”Maxkamaduhu dhaqan ahaan way iska indho tireen xayiraadaha ay shaqobixiyeyaashu saaraan xuquuqda shaqaalahooda ee ah inay helaan oo ay nolol helaan. Maaddaama shirkado badan lagu qasbay inay adeegsadaan warbaahinta bulshada ayna ku dhiirrigeliyaan shaqaalahooda inay kaqeybqaataan, sidee uga filan karnaa shaqaalihii hore inaysan ka qaybqaadan?
Waa caqabad shirkadaha, laakiin si daacadnimo ah waxaan ugu faraxsanahay in shirkadaha ay la kulmayaan qaar ka mid ah caqabadahaas adag. Saacadaha Dahabiga ah ayaa ka sii yaraanaya wax iska caadi ah iyada oo shaqaaluhu badiyaa soo rogaan.
Ma jiro wax la mid ah daacadnimo hadda ka dib shirkadaha… waxay daadinayaan dhowr boqol oo shaqaale ah iyagoon il-biiqayn haddii ay ka caawinayso in qiimaha saamiyadooda waxyar buuro. Shaqaaluhu waxay noqdeen kuwo adkaysi u leh inay daacad u ahaadaan loo shaqeeyayaashooda, iyagoo garwaaqsan in kordhintooda weyn ee soo socota ay u badan tahay inay timaaddo markay u guuraan shaqo bixiyahooda xiga.
Natiijo ahaan, qofna xitaa ma cabbiro saameynta ka-leexashada shaqaalaha mar dambe adeegga macaamiisha, tayada, ama xitaa guusha shirkadda. Warbaahinta bulshada ayaa laga yaabaa inay tan bedesho. Baraha bulshada ayaa wajiga shaqaalaha ka dhigaya hore iyo xarun… shirkadaha waxaa caan ku ah shaqaalahooda halkii ay ka ahaan lahaayeen astaamo iyo hal ku dhigyo aan weji lahayn.
In muddo ah kheyraadka aadanaha waxaa kaliya loo arkaa inay yihiin qarashka ugu weyn ee shirkadda, oo aan caadi ahaan lagu qiimeynin naftooda ay bixiyeen si loo hubiyo guusha iyo koritaanka shirkadda. Deyntaas marwalba waxaa lasiin jiray qolka guddiga.
Sida macaamiisha ay awood ugu siinayaan baraha bulshada inay shirkadaha ka dhigaan wax qabad iyo dhageysi, hadana shaqaaluhu waa la awood siiyay sidoo kale waxay matalaan shirkadaha ay u shaqeeyaan. Tani waxay uga baahan tahay shirkadaha inay dib uga fikiraan cidda ay shaqaalaynayaan, sida wanaagsan ee ay ula dhaqmaan shaqaalahooda, iyo sida loola macaamilo shaqaalaha tooshka.
Waxaa laga yaabaa in maalmaha saacadaha dahabka iyo sannad-guurada shaqaalaha ay soo noqon doonaan!
Tags: Suuqa Suuq-geyntaJohn Jantschaan tartaminwarbaahinta bulshada
Raadinta Maxalliga ah way sii kordheysaa, Xitaa Khariidada maku jirtaa?